धार्मिक बन्न किन आवश्यक ? - Kamana News
यस २१ औं शताब्दीमा पनि धार्मिकताको कुरा गर्दा हास उठ्न सक्छ । मानव जाती आएसंगै भगवानप्रतिको विश्वास भएको हुनुपर्छ । हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा, दुख हुदाँ, असफल हुदाँ मनबाट भगवानप्रति आस्था अचानक हुन्छ । अरु बेला भने हामी त्यस्तो खासै वास्ता गरेको देख्दैनौँ । हिन्दु धर्ममा करौडौ देवी देवताहरु रहेका छन् । हामी कुन देवी देवता मान्ने त्यो हामी कुन ठाउँ र कस्तो परिवारमा जन्मेको भन्ने कुराले फरक पार्छ । हिन्दु, ईसाईं, सिख, मुस्लिम आदि विभिनन धर्महरु विश्वमा पाईने गरिन्छ । सबैको आफ्नै निति नियम हुन्छ । कसैले पनि कसैलाई ठूलो र सानो भनन पाईने अधिकार हुदैँन ।
धर्मले हामीलाई आस्था राख्न मद्धत पुर्याउने गर्छ ।
हामीले. जीवनको मूल्य र आफनो कर्तव्यहरु धर्मको पाठबाट नै सिक्छौँ । यो सामान्य कुरा हो । जति बेला शिक्षाको विकास भएको थिएन धर्मको मान्य र मूल्यबाट नै मानिसहरु शिक्षा पाउने गर्थे । अहिलेको समयमा शिक्षाले विश्वलाई नै परिवर्तन गरेको छ । मानव जातिमा एक किसिमको बदलाउ आएको छ । धर्मलाई गफ हो र यसको पालना गर्नु हुदैँन भनने पक्षमा पनि धेरै मान्छे छन् र यो आफनो मान्यता हो । धर्मले मानवलाई गलत बाटो कदापी देखाउदैन तर कतिपय धर्ममा भने मानिसले आफ्नो गलत विचारहरु प्रस्तुत गरेकाले र आफ्नो धर्ममात्र उच्च हो भन्ने कुरचालाई प्रमाण्ति गर्न गलत बाटो पनि बनाएका छन् र यो गलत भावना हो ।
धर्म सबैको एक हो । सबैभन्दा ठूलो धर्म भनेको मानवता हो । अरुलाई आदर गर्नु, दुखमा परेकालाई सहयोग गर्नु, गलत काम नगर्नु, अरुलाई कुभलो हुने काम नगर्नु , मानवतालाई ज्यूदो राख्नु नै ठूलो धर्म हो । आफ्नो धर्म पनि मान्न आवश्यक छ किनभने धर्ममा हुने मानिसले विभिन्न कुरालाई ध्यानमा राखने गर्छन् । धर्ममा हुनेले भगवानलाई आदर गर्ने गर्छन र गलत काम गरेमा पाप लाग्ने उनीहरुको डर हुने गर्छ ।
धार्मिक बन्नुको पनि अनेक फाईदा हुने गरेको छ । मनमा विश्वास बढ्नुको साथै आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्न उत्साही बढ्नु र आफ्नो लक्ष्यप्रति लगाव हुन सहयोग गर्छ । धार्मिक बन्ने र नबन्ने आफ्नो ईच्छा हो । धार्मिक हुनु भनेको एउटा कुनै कुराप्रतिको विश्वास हो । विश्वास भएपछि यो संसार जित्न सजिल हुन्छ र दृढ पनि भईन्छ ।
शुक्रवार, पौष २४ २०७७१२:१२:१३